सरकारले वैशाखभरी विद्यालय बन्द गर्न भनेपछि प्याब्सनले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ती – Krazy NepaL
April 12, 2021 617
काठमाडौ । छिमेकी मुलुकमा भयावह बन्दै गएको कोरोनाको दोस्रो लहर नेपालमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ । नयाँ प्रकारको कोरोना थप खतरनाक भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । नेपालमा अवस्था विग्रन नदिन भन्दै सरकारले वैशाख महिना भर भिडभाड हुने क्षेत्र बन्द गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । विद्यार्थी र शिक्षकमा नयाँ प्रकारको कोरोना पुष्टि भइसकेकाले विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा छलफल भएको छ ।
कोरोनाको चेन तो ड् न विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सीसीएमसीको निर्णयमा नीजि विद्यालयको संगठनहरुले भने विरोध जनाएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै सरकारले काठमाडौंसहित प्रमुख शहरमा विद्यालय बन्द गर्ने तयारी गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रमुख शहरमा तीन सातासम्म विद्यालय बन्द गर्ने र अनलाइनमार्फत पठनपाठन गर्ने विषयमा सीसीएमसीमा छलफल भएको हो । तर निजी विद्यालयको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्याब्सनले स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त हुने बताएको छ । लामो समय बन्द भएर केही महिना देखि मात्र संचालन भएको विद्यालय फेरी बन्द गर्न पर्दा आर्थिक रुपमा ठूलो नोक्सानी हुने देखिएको छ । विद्यार्थीको पठन पाठनमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
कोरोना फैलने दर देशभर एउटै नहुने भएकाले अत्यन्त आवश्यक भए सम्बधित विद्यालय वा सम्बन्धित पालिकामा मात्र निश्चित समयका लागि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्न भन्दै प्याब्सनले अन्य ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गरेको छ । भौगोलिक विकटता, अभिभावकको आर्थिक सामाजिक अवस्था, इन्टरनेटको उपलब्धता र शिक्षकको प्राविधिक दक्षताका कारण अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नहुने प्याब्सनको भनाइ छ ।
Prevबिदामा घर आएका थिए तर कहिले नफर्किने गरी अ’स्ताए यी दुई युवा : गाउँने शो’कमा ! Rip
Nextनेपालमै भेटिए आधा केटा र आधा केटी भएका मान्छे ! यस्तो अचम्मको प्रतिभाले भए भाइरल
सन्तोष देउजाको घरमा के हुँदैछ र यस्तो ? हेर्नुहोस् भिडियो
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (44869)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (23650)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (18346)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (16392)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (13618)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (12760)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (12619)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12474)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (12156)